Waa la daabacay17.03.2022
Marka aad shaqo cusub ka billowdo Finland, waxaad sida caadiga ah shaqo-bixiyaha la geleysaa heshiis shaqo oo qoraal ah. Heshiiska shaqada waxaa looga heshiinayaa hawlaha shaqada, musharka iyo manfacyada iyo shuruudaha kale ee shaqada la xiriira. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaadka, waxyaabaha uu heshiiska shaqadu inta badan ka kooban yahay.
Heshiiska shaqada waxaa laga sameeya labo koobi, mid waxaa leh qofka shaqaalaha ah midda kalena shaqo-bixiyaha. Sida caadiga ah heshiiska shaqada waxaa ugu yaraan lagu qoraa arimaha soo socda:
Dhinacyada heshiiska shaqada
Shaqa-bixiyaha iyo shaqaaluhu waxay sixiixaan heshiiska shaqada.
Taariikhda ay shaqadu bilaabanayso
Haddii ay shaqadu tahay mid joogto ah ama mid waqti gaaban
Heshiiska shaqada watiga dheer ah ayaa ah mid guud. Macnihiisu waa shaqo soconaysa ilaa shaqaaluhu uu isaga tago shaqada ama shaqo bixiyuhu ka cayriyo. Shaqo-bixiyuhu waa inuu haystaa sabab uu wax ku eryi karo. Sababaha la ogol yahay waxay ku cad yihiin sharciga heshiiska shaqada. Haddii heshiiska shaqadu uu yahay mid ah ilaa waqti dambe, markaas qofka shaqaalaha ahi wuxuu haystaa shaqo joogto ah.
Heshiiska shaqada oo waqtiga ku xadidan macnihiisu waa in lagu heshiiyey bilowga iyo dhamaadka shaqada. Heshiiska shaqada waxaa laga dhigi karaa waqti qaaban, haddii sababo loo helo. Qawaaniinta iyo shuruudaha sharciga shaqada ayaa si taxader leh u dejija una qeexa, goorma ayaa la isticmaali karaa heshiisyada gaa-gaaban.
Heshiiska shaqadu wuxuu ahaan karaa mid waqtigiisa xadidan haddii sababaha yihiin tusaale ahaan.
jago madax ku xigeen ah
shaqaale dheeri ah oo xilli cayiman loo baahdo
Haddii waqtiga heshiiska shaqadu xadidan yahay, labada dhinac waxay ilaalinayaan waqtigaas, haddii aan lagu heshiin ka tegida shaqada. Shaqada xadidan waxaa layskaga eryi karaa oo keliya haddii ay jiraan sababo aad u culus oo qof shaqada looga eryi karo.
Waqtiga tijaabada iyo dhirirkiisa
Bilowga heshiiska shaqada waxaa lagu heshiin karaa waqtiga tijaabada. Waqtiga tijaabadu wuxuu noqon karaa ugu badnaan lix bilood. Waqtiga tijaabada ee Xiriirka shaqada waqtiga cayiman wuxuu noqon karaa ugu badnaan kala bar mudada heshiiska shaqada. Waqtiga tijaabada qofka shaqaalaha ahi wuxuu qiimayn karaa in shaqadu ku haboon tahay iyo in kale, shaqo-bixiyuhuna wuxuu qiimayn karaa in qofku ku haboon yahay shaqada. Inta lagu gudajiro waqtiga tijaabada labada dhinac way bur-burin karaan heshiiska shaqada waqti la'aan. Burburinta heshiisku waqtiga tijaabada inta lagu jiro ma noqon karo mid takoorid ku salaysan. Qofka shaqaalaha ahi wuxuu qaadanayaa mushaar caadi ah waqtiga tijaabada.
Goobta shaqada lagu qabanayo
Shaqadu waxay tahay
Mushaarka iyo mushaar bixinta
Mushaarku wuxuu ku salaysan yahay heshiiska shuruudaha shaqada. Haddii aysan lahayn wax heshiis shuruudaha shaqada ah, shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin inay helaan mushaar macquul ah. Shaqo-bixiyuhu ma dhiibi karo mushaar ka yar kan ku qoran heshiiska shuruudaha shaqada. Mushaarka waxaa ku jiri kara gunnooyin dheeraad ah. Gunnooyinka Finlad caadi ka ka ah waxaa ka mida ah gunnada da'da, tan saacada dheeriga ah iyo tan shaqooyinka xiliyadoodu is bed-bedelo.
Maalinta mushaarku inta badan waa hal mar ama laba mar bishiiba. Shaqo-bixiyuhu mushaarka wuxuu ku shubayaa koontada bangiga. Shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo sharaxaad ku saabsan mushaharka oo ay ka muuqato, qaybaha uu mushaarku ka kooban yahay.
Marka laga hadlayo mushaarka jumlo ah (bruttopalkka), waxaa loola jeedaa mushaarka oo aan laga jarin canshuurta, markii canshuuraha laga jaro waxaa qofka shaqaalaha ah u haraya mushaar saafi ah (nettopalkka).
Heshiiska waa in lagu qeexo waqtiga shaqada oo joogtada ah. Waqtiga shaqadu waa inuu waafaqsan yahay sharciga shaqada iyo heshiiska shuruudaha shaqada.
Fasaxa sannadka iyo lacagta fasaxa
Shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo waqtiga fasaxa mushaar la mida ah mushaarka marka uu shaqaynayo. Waxaa u dheer lacagta fasaxa. Bixinta lacagta fasaxu waxaa loo cuskanayaa heshiiska shuruudaha shaqada. Markii heshiiska shaqadu dhamaado, shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo magdhowga fasaxa oo ku salaysan maalmihii uu shaqaynayey oo uusan fasaxooda ama mag-dhawgooda horay u qaadan.
Waqtiga shaqo ka tagida
Heshiiska shaqada joogtada ah wuxuu dhamaadaa ka dib markii shaqa-bixiyaha ama shaqeeyuhu uu shaqada joojiyo ama heshiiskii ka baxo. Waqtiga shaqo ka tegidu waa waqtiga, qofka shaqaalaha ah uu waajibku ka saaran yahay inuu shaqada sii wado inta ay shaqadu ka dhamaanayso. Inta lagu guda jiro waqtigan qofka shaqaalaha wuxuu leeyahay xuquuqda shaqaalaha sidoo kale waxaa saaran waajibaadka shaqada, wuxuuna qaadanayaa mushaar caadi ah. Haddii shaqo-bixiyuhu shaqaalaha eryo, waa inuu sheego sababta. Sharciga shaqada ayaa sheegaya sababaha la aqbali karo oo shaqaalaha lagu eryi karo.
Xusid, waxyaaba sharciga shaqadu ka tixgeliyo heshiiska shuruudaha shaqada
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinoministeriö
Heshiiska shaqada iyo xiriir shaqo (shaqaalenimo)Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa